sai nyunt lwin: 2012
အခုတလော သတင်းတွေမှာ ခေတ်စားနေတာကတော့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ ညီလာခံဖွင့်ပွဲ အစ ကပွဲမှာ ထောင်ထားတဲ့ နိုင်ငံတော်အလံ ပြောင်းပြန်စောက်ထိုးဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းပါ။ သတင်း ဓါတ်ပုံတွေနဲ့မို့ ငြင်းရခက်တဲ့ ကိစ္စပါ။ အလံက အ၀ါ အစိမ်း အနီ အပေါ်ကနေအောက်ကို အစီအစဉ်အတိုင်းသွားရမှာကို အမှတ်တမဲ့ အနီ အစိမ်း အ၀ါ ဆိုပြီးတိုင်မှာ တပ်လွှင့်လိုက်တော့ ပြောင်းပြန်ကြီး ဖြစ်သွားရတာပေါ့။ မှတ်ချက်တွေ အမျိုးမျိုးပေးနေကြပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝကို ပြန်တွေးကြည့်ရင်း ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အလံတော် ပြောင်းပြန်ဖြစ်မှုတွေကို ပြန်လည်သတိရနေမိပါတယ်။
အခု ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ အလံတော်ဟာ အခု ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အလံလိုဘဲ အပေါ်ကနေအောက်ကို အ၀ါ အစိမ်း အနီ အလျားလိုက်အညီအမျှ ခြယ်ထားတာပါ။ ကွဲပြားတာကတော့ ရှမ်းပြည်နယ်အလံက အလယ်ခေါင်မှာ အဖြူရောင် "လ" အ၀ိုင်း ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အလံတော်ကတော့ အလယ်ခေါင်မှာ အဖြူရောင် "ကြယ်" ခပ်ကြီးကြီး တစ်လုံး ဆိုပြီးခြားနားတာဘဲ ရှိပါတယ်။
အဲဒီ အလယ်ခေါင်မှာ လပြည့်ဝန်းနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်အလံဟာ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ပြည်မနဲ့ တောင်တန်း ဒေသတွေ ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းကြဖို့ ဆွေးနွေးပွဲကနေ ပေါ်ပေါက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ရှမ်းစော်ဘွားတွေက ပြည်မနဲ့ ပူးတွဲပြီး အင်္ဂလိပ်အစိုးရဆီကနေ လွတ်လပ်ရေးရယူပြီး ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ ပြည်ထောင်စုကြီးကို ပူးပေါင်းထူထောင်ဖို့ ရှမ်းစော်ဘွားတွေ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့နေ့ကတော့ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၇) ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ စော်ဘွားတွေက အဲဒီနေ့ကို "ရှမ်းအမျိုးသားနေ့" ဆိုပြီး သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီနေ့မှာဘဲ ''ရှမ်းအမျိုးသားသီချင်း" နဲ့ "ရှမ်းအမျိုးသားအလံ" ကို သတ်မှတ်ခဲ့ တယ်။ ရှမ်းအမျိုးသားအလံကတော့ ပြောခဲ့သလို အ၀ါ အစိမ်း အနီ ကန့်လန့်ဖြတ်သုံးရောင်ခြယ်မှာ အလယ်ခေါင်က အဖြူရောင် လပြည့်ဝန်းကြီးကို ထည့်သွင်းထားတာပါ။
ရှမ်း အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေက ရှမ်းအမျိုးသားအလံကို အမြတ်တနိုးရှိကြပါတယ်။ ထားကြပါတယ်။ ရှမ်းအမျိုးသားနေ့ကိုလည်း နှစ်စဉ် တခုတ်တရ ပွဲကြီးတွေ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုကြီး ပေါ်ပေါက်စေခဲ့တဲ့နေ့ ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ နောင်အခါကြမှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရှမ်းအမျိုးသားနေ့ ရှမ်းအမျိုးသားအလံတွေကို ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အလံ ဆိုပြီး ပြောင်းလဲခဲ့ကြတာပါ။ သိပ်မကြာလှသေးတဲ့ သမိုင်းကြောင်းကလေးတစ်ခုပေါ့ဗျာ။
နှစ်ကိုတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ ၁၉၇၀ စောစောပိုင်းလောက်ကလို့ ထင်မိတယ်။ အဲဒီတုန်းက ရန်ကုန်မြို့ အောင်ဆန်းဘောလုံးကွင်းမှာ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေကို နှစ်စဉ်ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ကျင်းပနေတဲ့အချိန်ပေါ့။ လူပျိုပေါက် ကျွန်တော်တို့တွေကလည်း တစ်ပွဲမှ အလွတ်မပေး အားပေးခဲ့ကြ တာပေါ့။ ညနေ ၄-နာရီကစားမယ့်ပွဲကို နေ့လယ် တစ်နာရီလောက် ကွင်းထဲကြိုဝင် နေပူခံစောင့်ကြည့် ခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီလို နှစ်စဉ်ထဲက တစ်ခုသော ဖွင့်ပွဲမှာတော့ အသင်းလိုက်တန်းစီ ချီတက်အလေးပြုကြရာမှာ ရှမ်းပြည်နယ်အသင်းရဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်ပျိုဖြူရှေ့ကနေ လွှင့်ထူလာတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်အလံကြီးဟာ ပြောင်းပြန်စောက်ထိုးကြီး ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ အပေါ်အောက် အနီ အစိမ်း အ၀ါ ဖြစ်နေတာပေါ့။ တခြားဘယ်သူမှ မရိပ်မိပေမဲ့ အဲဒီနေ့က တက္ကသိုလ်လာတက်တဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်က ကျောင်းသားတွေကလည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ရှိနေတော့ ၀ိုင်းအော်ကြတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တန်းစီပြီး ချီတက်လာကြတာမို့ ဘယ်လိုမှ ပြန်မပြင်နိုင်တော့ပါဘူး။ သိသိကြီးနဲ့ ပြီးသည်အထိ ဆက်လျှောက်သွားရပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စမှာ အရေးယူမှု ရှိ-မရှိ ကျွန်တော် မသိလိုက်ရပါဘူး။
၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံမှာ နိုင်ငံတော်အလံတော်ကို ပြောင်းပြန်ထူပြီး ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေ အရေးယူ ခံရတယ်လို့တော့ ကြားဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရတယ် ဆိုတာ မသိခဲ့ပါဘူး။ မှန်-မမှန်ဆိုတာတောင် အတည်ပြုဖို့ မတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
နောက်တစ်ကြိမ် ကြုံရတာလည်း ရှမ်းပြည်နယ်အလံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေရာကတော့ အမျိုးသား ညီလာခံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ် အမျိုးသားညီလာခံကို စစ်အစိုးရက ကျင်းပပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားညီလာခံ အစုအဖွဲ့ အစည်းအဝေးတွေကိုတော့ ကျိုက္ကဆံကွင်းက အစည်းအဝေးခန်းကလေးတွေမှာ ခွဲပြီးကျင်းပတာပါ။ ပြီးတော့မှ အဲဒီအစုအဖွဲ့ အစည်းအဝေးလေးတွေက စာတမ်းတွေကို စိစစ်ပြီးမှ စုံညီ ညီလာခံမှာ တစ်ခါပြန်ပြီး တင်သွင်းရတာပါ။ အဲဒီစုံညီ ညီလာခံကိုတော့ သမ္မတ အိမ်တော်ဝင်းထဲက ခန်းမမှာ ကျင်းပပါတယ်။ လွှတ်တော် ကျင်းပတဲ့ခန်းမ မဟုတ်ပါဘူး။ မဆလ ပါတီ ညီလာခံတွေ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ ခန်းမလို့ ရောက်ခဲ့ဖူးသူတွေ ကတော့ ပြောပြပါတယ်။ အဲဒီ ခန်းမရှေ့မှာ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း အသီးသီးရဲ့ အလံတော်တွေကို တန်းစီပြီး လွှင့်ထူထားပါတယ်။
တစ်ခုသော စုံညီ ညီလာခံမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ SNLD ပါတီ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်မေသန်းလွင်က သူ့အတွက် ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးဖို့ ကျွန်တော့်ကို ပြောပါတယ်။ ကင်မရာဆွဲပြီး ခန်းမရှေ့ အလံတိုင်တွေရှေ့တည့်တည့်မှာ သူကရပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရှမ်းပြည်နယ်အလံ ပါအောင် ရိုက်ပေးဖို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း နောက်ဆုတ်ပြီး အလံတော်နောက်ခံနဲ့ ဒေါ်မေသန်းလွင်ပုံကို ရိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုတော့မှားနေတယ်လို့ ခံစားမိတာနဲ့ နောက်တစ်ပုံ ထပ်ရိုက်မယ်ပြောပြီး ချိန်လိုက်ပါတယ်။ လားလား အလံက ပြောင်းပြန်ကြီး ဖြစ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ရိုက်ဖြစ်အောင်တော့ ရိုက်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ဒေါ်မေသန်းလွင်နားကပ်ပြီး အန်တီ ရှမ်းပြည်နယ်အလံကြီးက စောက်ထိုးကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ တိုးတိုးပြောလိုက်တယ်။
ဒေါ်မေသန်းလွင်လည်း မော့ကြည့်လိုက်ပြီး ပါးစပ်ကို ရွဲ့ ၊ ပခုံးကို တွန့်ပြပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဘယ်လိုလုပ်မလဲ လို့မေးတော့ တိုးတိုးတိတ်တိတ် လုပ်ပါ လို့ပြောပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဒုက္ခရောက်စေဖို့ကို ကျွန်တော်တို့ မကြိုက်ပါဘူး။ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ ဒီသတင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ SNLD ထဲမှာတော့ ပြန့်နှံ့သွားပါပြီ။ လူကြီးတွေကလည်း အကျယ်အကျယ်မဖြစ်ဖို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကိစ္စ အပြင် ကျွန်တော်တို့က တန်းတူညီမျှတဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး ဘယ်လိုတည်ဆောက်သင့်တယ်ဆိုတာ တင်ပြနေတဲ့ အချိန်အခါပါ။ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ အဲဒီ အချက်ကို ထောက်ပြပြီး ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက် မျက်နှာပျက်စရာတွေ ဖြစ်မလဲ ဆိုတာ။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးက အဲဒီလို မလုပ်ချင်ကြပါဘူး။ အဲဒီအပေါ် အမြတ်ထုတ်တာမျိုး မဖြစ်ချင်ကြပါဘူး။ ဒါနဲ့ဘဲ ကျွန်တော်က လူကြီးတွေ ကြွလာမယ့် စင်္ကြန်လမ်းမှာ သွားစောင့်ပါတယ်။ အမျိုးသား ညီလာခံကျင်းပရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်မှူးသန်းထွန်း (ထောက်လှမ်းရေး) ကိုတွေ့တော့ သူကလည်း ကျွန်တော့်မျက်လုံးမြင်တာနဲ့ တစ်ခုခု ဖြစ်မှန်းသိပုံရပါတယ်။ ကျွန်တော့ဆီ တန်းလျှောက်လာပြီး ဘာလဲ လို့မေးပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အကျိုးအကြောင်းကို တိုးတိုးဘဲ ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ သူက ကျေးဇူးပါဘဲ၊ ချက်ချင်းပြင်လိုက်ပါမယ် လို့ ပြောပြီး ထွက်သွားပါတယ်။
ညီလာခံပြန်စတော့ ပြင်လိုက်တယ် ထင်ပါတယ်။ ညီလာခံ ပြန်နားလို့ သွားကြည့်တော့ အမှန်အကန်ပြန်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ မျက်စိစူးရှလှတဲ့ NLD အဖွဲ့တွေက ဗိုလ်မှူးသန်းထွန်းကို ဘာသွားပြောတာလဲဆိုပြီး အတင်းဝိုင်းမေးနေတာကိုတော့ ကျွန်တော့်မှာ မဖြေလည်း အခက် ၊ ဖြေလည်းအခက် ဖြစ်ခဲ့ရပါတော့တယ်။
Posted by sainyuntlwin at 21:060comments
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ အမှန်တကယ်ရရှိဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ဆိုရင် ဘယ်သူကမှ အငြင်းမပွါး လောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ တကယ့်ငြိမ်းချမ်းရေးကို လည်း အမှန်တကယ် လိုလားနေကြမယ် ဆိုရင်လည်း ငြင်းမယ့်လူ ရှိမယ် မထင်ပါဘူး။ လူတိုင်းက လိုလားနေပါတယ်ဆိုတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကြီးဟာ ဘာကြောင့် အခုထိ မရသေးတာလဲဆိုတာ ပြန်လည်ပြီး သုံးသပ်ဆန်းစစ်ဖို့ လိုနေပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
ပြည်မမှာနေကြတဲ့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ တော်တော်များများကို ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးမြန်းဆွေးနွေးကြည့်ပါတယ်။ နားလည်သူ အတော်ရှား ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲက မိတ်ဆွေတွေတောင် မသိနားမလည်သူတွေ အတော်များပါတယ်။ ယောင်တောင်ပေါင်တောင်တွေ များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးတူညီကြတဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားကြတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုကာလမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စကို အစိုးရက ဦးဆောင်ပြီးဖော်ဆောင်နေတာမို့ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ အချိန်ကာလလည် ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ် ခြောက်ဆယ်လောက်အထိ တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြလို့ အခုကာလမှာ ရပ်ဖို့သင့်ပြီဆိုတာ အားလုံးက လက်ခံထားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်သွား အောင်၊ ပြီးငြိမ်းသွားအောင် လုပ်နေတာလည်း အကြိမ်ပေါင်း အတော်များခဲ့ပါပြီ။ အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ ရှိခဲ့ပါပြီ။ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အခြေအနေမျိုးကို ခုထိ မတည်ဆောက်နိုင်ကြသေးပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့၊ မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတော့ အပြစ်မတင်လိုပါဘူး။ သူတို့ဆီက သင်္ခန်းစာ ကိုသာ ရယူရမှာပါ။ ဒါတွေကို လက်ရှိ အခြေအနေ၊ အနေအထား၊ အယူအဆတွေနဲ့ ယှဉ်တွဲသုံးသပ် စိစစ်ပြီး သင်္ခန်းစာယူ ဆောင်ရွက်ရမှာပါ။ လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖေါ်ဆောင်မှုမှာ ပြန်ပြီးအသုံးချရမှာပါ။
ဒီနေ့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဥပဒေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး ဆိုတဲ့ မဏ္ဍိုင်သုံးရပ် ငြင်းခုံပြောဆိုနေကြတာတွေ အားလုံးကို သတ္တုချကြည့် လိုက်ရင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲက ဖေါ်ပြချက်တွေဟာ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ။ ဥပဒေဆိုတာ ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ကိုယ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနေလို့ မရပါဘူး။ တိကျသေချာတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် တစ်မျိုးတည်း ရှိနေရ မှာပါ။ ဘယ်လို စွပ်စွဲပြစ်တင်မှုတွေ၊ စာချွန်တော်တွေ လုပ်ကြ ပါစေ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အားနည်းချက်ရှိနေတဲ့ အခြေခံဥပဒေကို ဖြည့်စွက် ပြင်ဆင်ရမယ့် အခြေအနေကနေ မကျော်လွှားနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီအခြေအနေမှာဘဲ အဆုံးသတ်ရမှာပါ။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး၊ တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့ ပြစ်တင်စကားတွေနဲ့ ဘာတွေဘဲ လုပ်နေလုပ်နေ ပြောနေပြောနေ နောက်ဆုံး တစ်နေ့ မှာတော့ ဘယ်သူမှ မကျော်လွှားနိုင်တဲ့ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်းကိုဘဲ သွားရမှာမို့ အဲဒီကို တစ်ခါတည်းသွားလိုက်ရင် ပိုမကောင်းဘူးလားလို့ တွေးမိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်တစ်နိုင်ငံတည်းသား အချင်းချင်းဖြစ်ကြတာမို့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး၊ တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ ထွက် ပေါက်မရှိအောင် ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်တာမျိုးဆိုရင် မကောင်းပါဘူး။ တစ်ဖက်ကိုလည်း ထွက်ပေါက် ပေးလုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အမြင်ကျယ်ပြီး ရေရှည်ကိုတွေးတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ မဲဆန္ဒရှင်တွေက ယုံကြည်လို့ နိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးလှတဲ့ မဏ္ဍိုင်ကြီးသုံးရပ်ဆီမှာ တာဝန် ပေးအပ်ခံခဲ့ရတာပါ။ ပိုပြီး သတိထားဆောင်ရွက်သင့် ပါတယ်။
အခုဖြစ်နေကြတဲ့ ကိစ္စကို ပဋိပက္ခ တစ်ခုလိုရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခြားအရေးကြီး လုပ်စရာတွေ ကျန်နေချိန်မှာ အကြောင်းမဲ့ အချိန်ကုန်နေတာမျိုး မဖြစ်သင့် ပါဘူး။ အကူးအပြောင်းကာလ ဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ အနေအထားဟာ တိမ်းစောင်းမသွားဖို့ကို အထူးဂရုပြုရပါမယ်။ အားလုံးက ၀ိုင်းဝန်းဖေးကူကြဖို့လိုပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလောကမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအပေါ် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးတစ်ခုလို သဘောထားသင့်တယ်လို့ ယူဆလို့ပါ။
ဒီလို အတိမ်းအစောင်းမခံနိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေထဲမှာ အလွန်ကို အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကတော့ ပြည်တွင်းတိုက်ပွဲတွေကနေ စစ်ရပ်စဲပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိဖို့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ အထက်မှာ ပြောခဲ့သလိုပါဘဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေမှာလည်း ကိုယ့်တစ်နိုင်ငံထဲသား အချင်းချင်းဘဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အသေအချာ လက်ခံထားရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ချောင်ပိတ်စေမယ့် ကိစ္စမျိုးကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ အခုကိစ္စမှာ ပြည်ပရန် မပါပါဘူး။ ကိုယ့်ပြည်တွင်းရေး ပြဿနာသာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြည်ပရန် မရှိတော့တဲ့ အချိန်ကာလရှည်ကြီး တစ်ခုမှာ ကိုယ့်ပြည်တွင်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့ ကြာရှည်နေတာ တကယ့်ကို ၀မ်းနည်းစရာကောင်းလှပါတယ်။
စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပြီး ဥပဒေကင်းလွတ်နေတတ်တဲ့ ဒေသတွေမှာ နေနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေဟာ လက်နက်ကိုင်သူ ဘယ်သူ့ကိုမဆို ကြောက်ရတာ ဓမ္မတာလို ဖြစ်နေပါပြီ။ ပြည်တွင်းက ရန်ကို ငြိမ်းသင့်ပါပြီ။ ပြည်ပရန်ကိုသာ ကာကွယ်ဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါပြီ။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရမှသာ ပြည်ပရန်အတွက် ပြင်ဆင်နိုင်မှာပါ။ ကိုယ့်အချင်းချင်း တိုက်လို့ခိုက်လို့ ရတဲ့ သူရဲကောင်းဆုတံဆိပ် တွေအတွက် ဂုဏ်မယူသင့်ပါဘူး။
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဆိုရင် တပ်မတော်ရဲ့ သဘောထားဟာ အလွန်ကို အရေးကြီးပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အရဆိုရင် သာမန်အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မဏ္ဍိုင်ကြီးသုံးရပ် ရှိပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံး ပိုင်းခြားကျင့်သုံးကြတယ်။ တပြိုင်နက်မှာဘဲ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အပြန်အလှန် ထိန်းညှိကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့ မှာတော့ တပ်မတော်ဆိုတဲ့ မဏ္ဍိုင်ကြီးတစ်ခုဟာ စတုတ္ထမြောက် မဏ္ဍိုင်ကြီးအဖြစ် တည်ရှိနေတာပါ။ တပ်မတော်ဟာ အခြေခံဥပဒေအရ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးကဏ္ဍတွေမှာ ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် အချိုးကျ အလိုအလျောက် ပါဝင်ခွင့်ရထားတာပါ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဖတ်ထားသူတွေ သိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဆိုရင် တပ်မတော်ရဲ့ သဘောထားဟာ အလွန်ကို အရေးကြီး တယ်လို့ဆိုချင်တာပါ။
(၂၀၀၈) ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း(၁) "နိုင်ငံတော် အခြေခံမူများ" ဆိုတဲ့အခန်း၊ ပုဒ်မ (၂၀) အပိုဒ် (ခ) မှာ ဒီလိုဖေါ်ပြထားပါတယ်။
(ခ) တပ်မတော်သည် တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စအားလုံးကို လွတ်လပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲ စီရင်ဆောင်ရွက် ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အဲဒီလို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားလို့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကိစ္စတွေမှာ တပ်မတော်ကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းပါဝင်နေမှ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ တပ်မတော်က ခေါင်းဆောင်ပြီး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ဆောင်ရွက်တာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ဆိုနိုင်လောက်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အဓွန့်ရှည်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဆိုရင် အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ခန်းစာတွေနဲ့ ထည့်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ပထမဦးဆုံး တပ်မတော်ပါဝင်တဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို အဦးဆုံးဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စ၊ နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကို အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက ဆက်လက်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြရမှာပါ။ နိုင်ငံရေးအမြင် မတူညီမှုတွေ၊ ကွဲလွဲမှုတွေ၊ အယူအဆတွေကို တတ်နိုင်သလောက်တူညီအောင် ညှိနှိုင်းကြရမှာပါ။ နိုင်ငံရေး ပြဿနာ ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းကြရမှာပါ။
အခုဆိုရင် သမ္မတရုံးဝန်ကြီးတွေ တိုးခန့်ထားတဲ့အပြင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်မှု ရုံးခန်းတွေတောင် ဖွင့်လှစ်ထားပြီဆိုတော့ အားတက်စရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကို ပိုပြီးဆောင်ရွက်မယ့်သဘောမို့ ကြိုဆိုသင့်ပါတယ်။ အခုဆို ပြည်ပရောက်အတိုက်အခံ အဖွဲ့တွေတောင် ပြန်လာနေကြပြီး နိုင်ငံရေးလောကသားတွေနဲ့ ဆွေးနွေးနေတာဆိုတော့ ဒါဟာလည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ပြည်ပမှာ သွားနေနေကြတဲ့ နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံတွေကိုတောင် ပြည်တွင်းပြန်ခွင့်ပေးပြီး နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ရင် အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးကိစ္စ မဆွေးနွေးနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ အလွန်များတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အလွန်များလှတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို ပြေလည်အောင်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ အလွန်ကိုဇွဲသန်ဖို့ လိုပါတယ်။ စိတ်ရှည်ဖို့လိုပါတယ်။ အမြော်အမြင်ကြီးဖို့ လိုပါတယ်။ စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိဖို့ လိုပါတယ်။ တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ ကတိက၀တ်တွေ ရှိကြဖို့လိုပါတယ်။ ပြောမယ်ဆိုရင် လိုအပ်တာက အများကြီးပါ။ ဒါပေမဲ့ ရှောင်လွဲမရနိုင်တဲ့၊ မလွဲမသွေ ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းကြရမယ့် ကိစ္စမို့ ဇွဲရှိရှိ ဖြတ်သန်းကြရမှာပါဘဲ။
ကျွန်တော်တို့ ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုထဲမှာဘဲ စာရင်းအကြမ်းကောက်ယူကြည့်လိုက်တော့ လက်နက်ကိုင် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ ခြောက်ဆယ်လောက်ရှိနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကိုယ်ကျိုးစီးပွါး အတွက် ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လက်နက်ကိုင်ထားသူတွေလည်း အများအပြားပါဘဲ။ ပြည်တွင်းစစ် ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲ ဆိုတာ အဲဒီအချက်တွေက သက်သေပြ နေပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးရမှသာ ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ပျောက်ကွယ် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ အခုပြောပြောနေတဲ့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတဲ့စကားရပ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး နီးစပ်အောင် ဆောင်ရွက်ကြဖို့ပါဘဲ။ အဲဒါကလည်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ တွေကနေပြီး နိုင်ငံရေးအရ နှစ်ဖက်စလုံး ကျေနပ် သဘော တူညီမှုတွေ ရမှ အောင်မြင်တယ်လို့ ဆိုနိုင်မှာပါ။ ဘယ်လောက်ဘဲ ခက်ခဲခက်ခဲ မဖြစ်မနေ မရမနေ ဆောင်ရွက်ရမယ့် ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းပါ။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်လာလ (၇) ရက်။
အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၂၅
စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၂၊ စနေနေ့။
Posted by sainyuntlwin at 14:220comments
ငရဲပြည်မှာ သူဌေး လုပ်ကြမလား ? နတ်ပြည်မှာ ဆင်းရဲသား လုပ်ကြမလား ?
တစ်လောက ခရိုနီအကြောင်း ရေးလိုက်မိတော့ ခရိုနီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတော်များများက လှမ်းပြီး ဆွေးနွေးကြ ပါတယ်။ ရေစကြိုမြို့က တစ်ဦးဆိုရင် ခရိုနီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ဒေသတစ်ဝိုက်မှာ အတော်ကြီးကို လုပ်ကိုင် စားသောက်နေတာကို ဖွင့်ပြောနေခဲ့တယ်။ သူ့အဆိုအရဆိုရင် ကျွန်တော် သုံးသပ်ခဲ့သလို ခရိုနီဆိုတာ ဟိုး ထိပ်ပိုင်း တွေမှာတင်မက နေရာအတော်များများမှာလည်း ရှိနေတာကို လက်ခံရပါတော့မယ်။ နယ်ဒေသတွေမှာ ရှိတဲ့ သစ်ကွက်မှန်သမျှ ဘယ်ကလာမှန်းမသိရတဲ့ သူတို့တွေချည်းဘဲ ခုတ်ခွင့်ရတယ်။ ဒေသမှာ နေသူတွေ အိမ်ဆောက်ဖို့ သူတို့ရွာနားက သစ်ပင်ခုတ်၊ လွှတိုက်လုပ်နေတုန်း အဆင်မပြေချင်တော့ အဖမ်းခံရပြီး ထောင်ထဲကို ရောက်လာတာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ထောင်ထဲမှာ မေးမြန်းကရုဏာ သက်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဟုတ်တော့ ဟုတ်နေပါပြီ။
ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော ဆိုတဲ့လူတွေ နိုင်ငံအနှံ့ အပြားမှာ ရှိနေတာကို ထည့်မတွက်လို့ မရ တော့ပါဘူး။ သစ်တောခုတ်ခွင့်ပါမစ်တွေ လက်ထဲကိုင်၊ သစ်ကွက်ကိုလာပြီးကြည့်တော့ သစ်ကတစ်ပင်မှ မရှိတော့ ဘူး။ ကိုယ့်ထက်လက်ဦးတဲ့သူက ခုတ်ယူသွားပြီးပါပြီ။ ကိုယ့်လက်ထဲက ပါမစ်ကလည်း ငွေပေးထားပြီးပြီဆိုတော့ မထူးတော့ပါဘူး၊ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်ပါမစ်ထဲမပါတဲ့နေရာက တွေ့ရာသစ်တွေကို ခုတ်ပြီး ထုတ် သွားတာတွေကတော့ တောရွာဒေသက လူတွေအဖို့ ရိုးလွန်းလို့ပျင်းတောင် နေကြပါပြီ။ မြစ်ကမ်းချောင်းကမ်းတွေမှာ ရွှေရှာနေကြ တာကလည်း မျက်စိတစ်ဆုံးပါဘဲ။ မြစ်ချောင်းကြမ်းပြင်အတွင်းကို လှိုက်တူးကြသလို ဘေးက သောင်စပ် တွေကိုလည်း တူးနေကြလေရဲ့။ ငွေမရှိ၊ မများတဲ့လူ၊ အဆက်အသွယ်မရှိတဲ့လူ အဲဒီလူတွေကတော့ ပါမစ်ရထားတဲ့လူတွေကို တစ်ဆင့်ခံငွေပေးပြီး လုပ်ကိုင် ကြရတာ ပွဲကြီးလမ်းကြီး တစ်ခု လိုပါဘဲ။ အဲဒီလိုမျိုးပါပဲ။ လက်တူးရေနံတွင်းတွေဆိုတာကလည်း နေရာအတော်များများမှာပါ။ မှော်သစ်ပေါ်ပြီဟေ့ ဆိုရင် လူတွေတစ်ပြုံကြီး ရောက်လာကြတော့တာပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့လည်း မကြာပါဘူး လုပ်ကိုင်ခွင့်ရထားတယ်ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီဆီကို တွင်းတူးခွန်တွေ ပေးဆောင်ရပြန်ပါတယ်။ ရလာတဲ့ ရေနံစိမ်းတွေကိုလည်း အဲဒီကုမ္ပဏီဆီကိုပဲ လျှော့ဈေးနဲ့ ပြန်သွင်းကြရတယ်။ ဘာမှ မလုပ်မကိုင်ဘဲနဲ့ လုပ်ခွင့်ပါမစ်လက်ထဲကိုင်ထားရုံနဲ့ ရလိုက်တဲ့ငွေတွေက မက်လောက် စရာပါ။ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပါမစ်တွေက ဒေသခံတွေရတာ မရှိသလောက်ပါ။ အားလုံးနီးပါးက အပေါ်က ဆင်းလာကြတာပါ။ သူတို့ဘယ်လို နည်းလမ်းတွေနဲ့ လိုင်စင်ရခဲ့ကြသလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိကြပါဘူး။ အားလုံးကို အသိပေးပြီး လေလံ ဆွဲတယ်ဆိုတာမျိုးလည်း မကြားဖူးကြပါဘူး။ ဒါဆိုရင် ခရိုနီတွေကသာ လိုင်စင်ရနေကြတာလို့ အကြမ်းဖျင်း ပြောနိုင် လောက်ပါပြီ။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ခရိုနီတွေ အတော်ကို များနေပြီလို့ သုံးသပ်ရပါလိမ့်မယ်။
ကမ္ဘာကျော် ဂန္ဓ၀င် ၀တ္တုကြီး တစ်ပုဒ်မှာ ရေးထားတာ ပြန်သတိရမိတယ်။ စီးပွါးရှာလို့ အကောင်းဆုံးအချိန် ကတော့ တိုင်းပြည်ပျက်နေတဲ့အချိန်၊ စပ်ကူးမတ်ကူး အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်နေချိန်၊ တိုင်းပြည်ပြန်လည် တည်ဆောက် ထူထောင်နေတဲ့အချိန်၊ အဲဒီလိုအချိန်မျိုးက စီးပွါးရှာလို့အကောင်းဆုံးလို့ ရေးသားထားတာ သတိရမိပါ တယ်။ ဟုတ်မှာပါ။ မြန်မာတွေကတော့ အဲဒီအချိန်မျိုးမှာ သူဌေးဖြစ်သူတွေကို ခေတ်ပျက်သူဌေးလို့ ပြောကြတာ ကြားဖူးပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက အကူးအပြောင်းကာလ မဟုတ်လား။ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှတာက ကျွန်တော်တို့ အကူးအပြောင်းကာလဟာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်း နှစ်ခုကျော်လို့ ငွေရတုပွဲတောင် ဆင်ယင်ရတော့မယ့် ကာလရောက်လာပါပြီ။ ဒီလောက် နှစ်တွေကြာအောင် ကူးပြောင်းရေးကာလ ကြာခဲ့တော့လည်း ခရိုနီတွေရဲ့ လက်ချက်ကို ထင်ထားတာထက် အများကြီးခံလိုက် ကြရမှာပါ။
လူငယ်တစ်စု နဲ့ အဲဒီ ခရိုနီအကြောင်းပြောကြတော့ သူတို့က ခရိုနီဆိုတာ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိတယ်။ ဘယ်လိုလုပ် ပြီး ပပျောက်အောင် လုပ်မလဲလို့ မေးလာပါတယ်။ ကျွန်တော်က နိုင်ငံတိုင်းမှာ ခရိုနီရှိတယ်လို့တော့ ကျွန်တော်မသိတဲ့ အကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ ဥပဒေပြဌာန်းချက်တွေကို လိုက်နာရင်တော့ ခရိုနီဆိုတာ မရှိနိုင်ကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။ ပြဌာန်း ဥပဒေကို မလိုက်နာဘူးဆိုတာက ခြစားမှု ကိုပြောကြောင်း ရှင်းပြရတယ်။ ဥပမာ သစ်ခုတ်ခွင့်ရသူတွေဟာ ဘယ်လို နည်းနဲ့ ရမှန်း ဘယ်သူမှ မသိပါဘူး။ ရခဲ့တဲ့ ပါမစ်ကို သစ်ထုတ်လုပ်ရေးဥပဒေနဲ့ ညီညွတ်အောင် ခုတ်တဲ့အဖွဲ့ ဆိုတာ မရှိလောက်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေက ခရိုနီနဲ့ ခြစားမှု (corruption) ဆက်စပ်မှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်လို့ သူ တို့ကို ရှင်းပြပါတယ်။ သူတို့က အထွန့်တက်ပြန်ပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ကိုယ့်တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း ကြီးပွါးရာ ကြီးပွါးကြောင်း လုပ်ကိုင်နိုင်ကြတာဘဲ မဟုတ်လား ဆိုပြီး ထောက်ပြပါတယ်။ ဒါကိုတော့ ကျွန်တော် ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကြီးပွါးရာ ကြီးပွါးကြောင်းက တိုင်းပြည်အတွက် အနှောက်အယှယ် ၀န်ထုပ် ၀န်ပိုး မဖြစ်ရပါဘူး။ တိုင်းပြည်ရဲ့ သယံဇာတတွေကို ထုတ်သုံးရင် တိုင်းပြည်အတွက် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးစေမဲ့ အခွန်အ တုတ်ကအစ၊ ပတ်ဝန်ကျင်ယိုယွင်းမှု မရှိစေဖိုက အလယ်၊ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးတာ ထိန်းသိမ်းတာ အဆုံး လုပ်ဖို့တာဝန် မရှိဘူးလား လို့ပြောရပါတယ်။
သူတို့တွေ သိပ်သဘောမပေါက်ပါဘူး။ စီးပွါးရေးကို နိုင်ငံရေးနဲ့ တွက်တဲ့ သဘောမျိုးတွေလည်း ဆွေးနွေးကြပါ တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ချမ်းသာတဲ့ လူတိုင်းကိုတော့ ခရိုနီလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူးလို့ ယုံကြည်ကြောင်း၊ အာဏာရှိသူတွေ ကိုယ်တိုင် ဒါမှမဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ဘယ်သူမှ မရတဲ့ အခွင့်အရေး၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း တွေကို (နည်းလမ်းတကျ မဟုတ်ဘဲ) ရခဲ့ကြပြီး ကြီးပွါးချမ်းသာနေတဲ့လူမျိုးကိုသာ ခေါ်သည်ထင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ကြီးပွါးချမ်းသာအောင် လူတိုင်းကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နည်းလမ်းတကျ ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ခြားလူတွေ ကိုလည်း ယှဉ်ပြိုင်လျှောက်ထားခွင့်၊ လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့် ပေးရပါမယ်။ ဘယ်သူမှ အသိမပေးဘဲ ကိုယ့်ဖာသာကြိတ်ပြီး ရလာတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပါမစ်တွေ ကိုင်ဆောင်သူတွေဟာ များသောအားဖြင့် စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ပရမ်းပတာ လုပ်ကိုင် တတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်သူ သေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ဒါမျိုး ဖြစ်နေတာ လေ့လာသူတိုင်း သိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ဘဲ ရာထူးငယ်တဲ့ ၀န်ထမ်းဖြစ်နေပါစေ။ သူ့ နောက်ကွယ် အဆက်အသွယ်က လူကြီးမင်းတစ်ယောက်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ မခိုင်းရဲတော့ပါဘူး။ မျက်နှာသာပေးနေ ရပါပြီ။ မပေးဘဲ နေကြည့်ပါ။ ဘာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာ လူတိုင်းက နားလည်နေကြတဲ့ အခြေအနေပါ။ အရာရာက အာ ဏာသာ လွှမ်းမိုးနေခဲ့တာပါ။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတို့ ဥပဒေ နည်းဥပဒေ တို့ဆိုတာ သိပ်ဂရုမစိုက်တော့ပါဘူး။ မဆလ ခေတ်တုန်းကတော့ ဥပဒေ ထက် စီမံချက်ကို ဦးစားပေးခဲ့ရတယ်။ မကြာခင်ကာလအထိ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထက် အာဏာရ လူကြီးအဆက်အသွယ်ကို ပိုပြီး ဦးစားပေးခဲ့ရတယ်။
အခုတော့ အစိုးရ အပြောင်းအလဲ ရှိခဲ့ပြီ။ ခြစားမှုတွေကို တိုက်ဖျက်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဥပဒေ စိုးမိုးတဲ့ အစိုးရ ဖြစ်ဖို့ကိုလည်း ကြိုးစားနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဆိုမှန်ပါတယ်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိသရွေ့ ခြစားမှုတွေရှိ နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကလည်း ကိုယ်ဝမ်းပူဆာ မနေသာလို့ လုပ်နေရတာပါ ဆိုတဲ့လူတွေကိုလည်း သူ တို့ဝမ်းတွေ ပူမနေရအောင် ဆာမနေရအောင် လုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ဂျာအေးသူ့အမေရိုက် ပတ်ချာလည် ပြဿနာကြီး ကို စနစ်တကျ ထိန်းချုပ်နိုင်မှ ရမှာပါ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ချမ်းသာနေကြတာကို မနာလို မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ တရားနည်းလမ်းကျကျ နဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် လည်း ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက် ရသင့်ရထိုက်တာ ရဖို့ဘဲလိုပါတယ်။ တိုင်းပြည်ပိုက်ဆံဟာ ပြည်သူ့ပိုက်ဆံဘဲ မဟုတ်လားဗျ။ လူတိုင်း၊ ပြည်သူတိုင်း ချမ်းသာရင်ကော ပိုမကောင်း ပေဘူးလား။ အသံလွှင့်ဌာန တစ်ခုက ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုရဲ့ခေါင်းစဉ်က - အဆင်းရဲဆုံးတိုင်းပြည်က အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်း ဆိုတာမျိုးဆိုရင် ဘယ်လိုခံစားကြည့်ကြမလဲဗျာ။
ကျွန်တော်နဲ့ စကားပြောတဲ့လူငယ်တွေကို ချက်ချင်းသဘောပေါက်အောင် ဘယ်လိုများ ရှင်းပြရင် ကောင်းမလဲ လို့ စဉ်းစားရင်း ဥပမာ တစ်ခုကို စဉ်းစားမိတာနဲ့ သူတို့ကို မေးရှင်းလေး ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားကြစမ်းပါ။
နတ်ပြည်မှာ ဆင်းရဲသား လုပ်ကြမလား။
ကျွန်တော်ကတော့ နတ်ပြည်က ဆင်းရဲသားဘဲ ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဗျာ။
၂၀၁၂ သြဂုတ်လ (၁၈) ရက်
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၆) ရက်ထုတ်
အတွဲ-၃ ၊ အမှတ်- ၁၁၀ တွင်ဖေါ်ပြပါသည်။
Posted by sainyuntlwin at 19:120comments
ငရဲပြည်မှာ သူဌေး လုပ်ကြမလား ? နတ်ပြည်မှာ ဆင်းရဲသာ...